Kadib weerarkii Aramco, Pentagon wuxuu isku dayayaa hub cusub oo looga hortago diyaaradaha aan duuliyaha laheyn – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kadib weerarkii Aramco, Pentagon wuxuu isku dayayaa hub cusub oo looga hortago...
Kadib weerarkii Aramco, Pentagon wuxuu isku dayayaa hub cusub oo looga hortago diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Pentagon-ka ayaa sare u qaaday tijaabinta hubka cusub ee loogu talagalay bartilmaameedsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee duulimaadka ah ka dib weerarkii 14-kii September lagu qaaday xarunta ugu weyn ee saliida Sacuudiga.
Pentagon-ka wuxuu sheegay in khatarta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay gaareen heer aad u sareeya aagagga iskahorimaadka, taas oo ku kalliftay Pentagon inay ka iibsato hubka PHASER shirkadda difaaca Raytheon, oo hoggaamiye u ah soo saarista hubka, sida lagu sheegay majaladda Defence Mechanics Popular.
Makiroweyska (microwaves) iyo isugeynta tamarta
Pentagon-ka ayaa u sheegay Congress-ka in ay soo iibsatay nidaam hub oo microwave cusub oo lagu tijaabin doono aagagga iskahorimaadka si loo hubiyo wax-ku-oolnimada, majaladda ayaa lagu sheegay warbixin.
Hubka cusub ee casriga ah waxaa lagu gartaa inuu awood u leeyahay inuu ridayo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn isagoo adeegsanaya mikrowawaro iyo isjiidjiida tamarta si ay u toogtaan una burburiyaan diyaaradaha qumaatiga u kaca.
Iibsiga ayaa loogu talagalay in loo diro PHASER dibadda dib u qiimayn muddo dhan ah, taasoo ka dhigaysa hubkii ugu horreeyay ee abid difaaca.
Sida lagu sheegay warbixinta, nidaamka ayaa lagu iibsaday Pentagon $ 16 milyan oo doolar si loogu sameeyo qiimeyn gudaha ah oo lagu sameeyo aagagga colaadaha iyadoo ujeeddada laga leeyahay imtixaan la filayo in la soo gabagabeeyo dhammaadka Diseembar sannadka soo socda.
Waxa jira hub badan oo la bartilmaameedsaday oo ah tamarta tamarta ee ay ciidamada Cirka iibsanayaan si ay u tijaabiyaan wax ku oolnimada aaggan, saraakiisha ayaa leh, kuwaa oo qaarkood noqon doona safka hore ee aagagga xiisadaha adduunka halkaasoo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay noqdeen khatar khatar ah oo ay ka mid yihiin Kuuriyada Waqooyi, Afrika, Ukraine iyo Bariga. Pentagon-ka ma uusan sheegin in nidaamkaan lagu tijaabin doono Sacuudi Carabiya.
Kadib weeraradii Aramco
Saraakiil ka tirsan ciidamada cirka ee Mareykanka iyo nidaam sameeyaha Raytheon ayaa sheegaya in iibsigu uu socday muddo, laakiin waqtiga ku dhawaaqidda ayaa timid ka dib markii la weerarey xarumaha saliida ee Sacuudi Carabiya Weerarkii ugu dambeeyay ee lagu qaaday xarumaha saliida ee Sacuudi Carabiya ayaa lagu muujiyey khataraha diyaaradaha aan duuliyaha laheyn wuxuuna ka xanaaqay falcelin deg deg ah Pentagon. .
Nidaamka PHASER wuxuu ku shaqeeyaa mikrowawaxyo lagu carqaladeeyo diyaaradda fasalka koowaad iyo kan labaad, oo miisaankeedu yahay inta u dhexeysa 25 kiilogaraam iyo u duulo cimilo u dhexeeya 1,200 illaa 3,500 cagood xawaare u dhexeeya 100 illaa 200 oo garaac.
Joornaalku wuxuu sharxayaa hubka “PHASER” microwave cannon (microwave) saacad kasta wuxuuna soo bandhigayaa soo noqnoqoshada qaab toosan, looma jeedin inuu baabi’iyo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn, laakiin burburinta nidaamyada elektiroonigga ah sidaas darteedna waxay carqaladeeyaan oo hoos u dhacaan.
Joornaalka ayaa sheegaya in hubkan cusub uu yahay mid wax ku ool ah oo macnaheedu yahay in uu hadda matalayo guul muddo dheer la sugayay oo loo qabo hanjabaaddan dilaaga ah, si kale haddii loo dhigo, hubkan waxaa loo astayn doonaa inuu yahay anti-drones.
Previous articleAfter the Aramco attack, the Pentagon is trying a new weapon against the drone
Next articleHuawei oo iibisay hal milyan oo taleefanka “mate 30” 3 saacadood gudahood
Dufcadii Todobaad Ee Ciidanka Dab-demiska Oo Tababar Loo Xidhay